FEPETRA FAMPITONIANA : Voatery hiroso amin’ny famotsoran-keloka ny mpanatanteraka
Tsy mandà ny hirosoana amin’ny fandaniana ny lalàna mahakasika ny famotsoran-keloka ny Filohan’ny Fahefana avon’ny tetezamita, Andry Rajoelina, raha ny tatitra nivoaka taorian’ny fihaonany tamin’ireo mpikarakara ny fihaonambem-pirenena nahitana ny avy amin’ny « Raiamandreny mijoro » sy ilay fikambanana eo anivon’ny fiarahamonim-pirenena « Finoana », omaly. Adiny iray mahery teo raha ny tsilian-tsoina no naharetan’ity fihaonana notanterahina teny Ambohitsorohitra ity. Nampahatsiahy ireo fehin-kevitra nivoitra tamin’ilay fihaonambem-pirenena notanterahina teny Ivato ny 13 ka hatramin’ny...
MINISITRA RATOVOMALALA MAMY : « Tsy tokony hiakatra ny vidin-tsolika hatramin’ny faran'ny volana desambra 2010
Tsy hihetsika ny vidin-tsolika. Nanambara ny minisitry ny Solika sy ny harena an-kibon’ny tany, Mamy Ratovomalala omaly fa raha ny fijery ankapobeny dia tsy tokony hiaka-bidy mihitsy ny vidin-tsolika eto amintsika hatramin’ny faran’ny volana desambra 2010 izao. « Efa nisy ny fandinihana ny marika rehetra ahafahana mamantatra izany », hoy izy. « Raha hisondrotra hatramin’ny 90 dolara ny « baril »n’ny solika, eo amin’ny tsena iraisam-pirenena, dia tsy maintsy hisy toy ny teo aloha ihany ny fifampidinihana amin’ireo kaompanian-tsolika eto amintsika, mba hitsinjovana ny mpanjifa », araka...